ခရီးသွားခြင်း - ခရီးသွားသတင်းများ ခရီးသွားသတင်း (၅)
Zahara de los Atunes တွင်ဘာတွေတွေ့ရမလဲ
Cádizပြည်နယ်ရှိကမ်းရိုးတန်းမြို့ဖြစ်သော Zaraha de los Atunes တွင်မြင်တွေ့ရသမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
Buitrago del Lozoya နှင့်၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှု
အကယ်၍ သင်သည်အလယ်ခေတ်မြို့များကိုနှစ်သက်ပါကအပန်းဖြေရန်နေရာကောင်းမှာမက်ဒရစ်မြို့နှင့်မနီးမဝေးတွင်တည်ရှိသည့် Buitrago del Lozoya ဖြစ်သည်။
“ သစ်တောသစ်တော” ဟူသည်အရသာရှိသောအချိုပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ဥရောပ၏လှပသောareaရိယာကိုရည်ညွှန်းသည်။
Maro ၏ချောက်ကမ်းပါးရှေ့တွင် Alboran ပင်လယ်၏အပြာမှမည်သည့်အရာကမျှ ...
Sierra de Gredos, သဘာဝနှင့်ကြယ်
Sierra de Gredos သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ပြည်နယ်အများအပြားမှတစ်ဆင့်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဒေသဆိုင်ရာဥယျာဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။
ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအမွေအနှစ်များပံ့ပိုးပေးသော Asturias တွင်တည်ရှိသည့်ကျေးလက်နေသည့် Taramundi မြို့တွင်မည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
Zahara de la Sierra, Cádizရှိ ဦး တည်ရာ
စပိန်တွင်ရက်အနည်းငယ်သာအနားယူရန်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောနေရာများနှင့်ခရီးစဉ်များစွာရှိသည်။ ဒီခရီးစဉ်တစ်ခုက ...
Altamira ဂူများ၊ သမိုင်းမမီသည့်အနုပညာ၏ Sistine Chapel
၁၉ ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင် Altamira ဂူများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကရရှိခဲ့သောအသိပညာပြောင်းလဲမှုကိုဆိုလိုသည်။
မြင်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုပြောပြပြီး Asturias မှာရှိတဲ့ခရီးသွား very ည့်အရမ်းများတဲ့ငါးဖမ်းမြို့ Luarca ကိုဘယ်လိုသွားနိုင်မလဲဆိုတာပြောပြပါမယ်။
နော်ဝေ fjords ဆိုတာဘာလဲ
ငါနော်ဝေခံတပ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးစီးလာတဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမသိတဲ့လူတွေအားလုံးအံ့သြထိတ်လန့်လာတယ်။ သဘာဝရှိ ...
Puebla de Sanabria မှာဘာကြည့်ရမလည်း
Castilla y Leónရှိ Zamora ပြည်နယ်ရှိ Puebla de Sanabria တွင်တွေ့ရသောအရာအားလုံးကိုသင်တို့အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
Lanzarote ရှိ Timanfaya အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်ခရီးသွား and ည့်သည်နှင့်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာစိတ် ၀ င်စားမှုကြီးမားသောမီးတောင်ရင်းမြစ်ဥယျာဉ်နှင့်မည်သို့ဆင်တူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
London Eye, လန်ဒန်ရှိမဖြစ်မနေ
မြို့ကြီးများစွာသည်ခရီးသွား point ည့်ရှုထောင့်နှင့်အညီဆွဲဆောင်မှု၊ အတွေး၊ ဥပမာတစ်ခုကလန်ဒန်ဖြစ်သည်။
Lugo, Galicia ရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ
Playa de las Catedrales သည်သဲသောင်ပြင်ဖြစ်ပြီး Galicia ရှိ Lugo ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး၎င်း၏ကျောက်ဆောင်များကြောင့်လူသိများသည်။
Galicia ရှိ Paradores
ကျနော်တို့ Galicia မှာတည်ရှိပါတယ် Paradores, သမိုင်းဝင်အဆောက်အ ဦး များသို့မဟုတ်အထူးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအဆောက်အ ဦး များတွင်တည်ရှိသည်နေရာထိုင်ခင်း၏ကွန်ယက်အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Burgos ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခု Gothic အလှတရား
ငါသည်အခြားဗိသုကာပုံစံများထက် Gothic အသင်းတော်များကိုအမြဲတမ်းကြိုက်ခဲ့သည်၊
Porto Cristo တွင်ရှိသော Mallorca ကျွန်းရှိလူသိများသော Drach Caves တွင်မည်သည့်နေရာသို့သွားရကြောင်းနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
Zaragoza ရှိ Water Park မှတဆင့်လမ်းလျှောက်ပါ
အထူးသဖြင့်ပြပွဲများသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပွဲတော်များအတွက်စိုက်ထူသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသည်များသောအားဖြင့်ထာဝရတည်ရှိသည်။ ကိစ္စလား ...
အဘယ်အရာကိုRía de Arousa တွင်ကြည့်ပါ
Galicia ကမ်းရိုးတန်းရှိRía de Arousa တွင်လှပသောမြို့များကိုသင်ပျော်မွေ့နိုင်သောနေရာတွင်သင်မြင်နိုင်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
Castillo de San Marcos သို့အလည်အပတ်ခရီး
ပိုလန်၏မြို့တော်ဝါဆောသည်ယနေ့ခေတ်တွင်လူ ဦး ရေ ၂ သန်းနီးပါး၏တက်ကြွသောမြို့ဖြစ်သည်။
Florence သည်အီတလီရှိဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ လူအတော်များများသည်တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောခရီးကိုနှစ်ရက်၊ သုံးရက်သွားကြသည်၊ သို့သော်ငါတကယ်ကျွန်ုပ်သည်ဖလောရင့်စ်မြို့သို့သွားမည်နည်း။ ကောင်းပြီ, Floerncia ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့သွားပြီးသင်ပင်ပန်းနေလျှင်ပင်၎င်း၏အမိုးခုံးအထိခြေလှမ်း ၄၀၀ ကျော်တက်ပါ။ အဆိုပါအမြင်များကိုကြီးပါ!
ဥရောပသည်အသင်းတော်များနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးအင်္ဂလန်တွင်ချွင်းချက်မရှိပါ။ သာဓကအားဖြင့်လန်ဒန်မှာအင်္ဂလီကန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်တဲ့ St. Paul's ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတွေ့နိုင်တယ်။ လန်ဒန်ကိုသွားမလား။ San Pablo ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်၎င်း၏ဘဏ္asuresာတိုက်များ - ပြခန်းများ၊ အမိုးခုံး၊ crypt၊ လုံးဝအရာအားလုံး!
ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးတောင်က rest ၀ ရတ်တောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်အချို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ နှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်သောလှပသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဂေဟစနစ်တန်ဖိုးများကိုတွေ့နိုင်သည်။
ရောမမြို့သည်လှပသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ မင်းတနေ့လုံးလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီးအချိန်တိုင်းအံ့ can နိုင်လို့ငါသဘောကျတယ်
လှပသော Gili ကျွန်းစု
အရှေ့တောင်အာရှသည်ပရဒိသုနှင့်ထိုက်တန်သောရှုခင်းများရှိပြီးအချို့ကို Lombok အနီးရှိ Gili Islands မှ ...
The Little Mermaid ၏ဇာတ်လမ်းကိုမည်သူဖတ်။ မဖတ်ခဲ့သနည်း။ အကယ်၍ ၎င်းသည်စာဖြင့်ရေးသား။ မရပါက ...
ဥရောပရှာဖွေတွေ့ရှိရန် Interrail လမ်းကြောင်း
Teide ကေဘယ်လ်ကား၊ မင်းမသွားခင်ဘာသိရမလည်း
Tenerife ကျွန်းသို့ခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မလွတ်နိုင်သည့်နေရာများထဲမှတစ်ခုမှာ Teide၊
အဆိုပါ Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း
ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေပြီးအံ့သြစေသည့်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များစွာသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်၎င်းတို့မည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြသနည်း။ ဒါပေမယ့်ဘာလဲ ...
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးဗဟိုဌာန၏မျှော်စင်အမြွှာအမြစ်ကို ၁၉၇၃ တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်၏ထင်ရှားသောအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
Grutas de San José, ဥရောပမှာအရှည်ဆုံးမြေအောက်မြစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း
Vall d'Uixóတွင်တည်ရှိပြီးအထူးသဖြင့် Sierra de Espadánသဘာဝဥယျာဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဂူများကိုတွေ့ရှိသည်။
ရောမမြို့၏ Capitoline ပြတိုက်
ဗာတီကန်ပြတိုက်များနှင့်အတူ, ရောမ၏မြို့တော်ပြတိုက်မြို့တော်အတွက်အရေးအပါဆုံးစဉ်းစား ...
အဘယ်အရာကို Biarritz အတွက်ကြည့်ရှုပါ
အကယ်၍ သင်သည်ဆောင်းရာသီကိုသည်းမခံသောကြောင့်လာမည့်နွေရာသီတွင်စဉ်းစားနေသောသူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် ...
လီဗာပူးလ်သည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏လူသိအများဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းရှစ်ရာကျော်မျှသာဖြစ်သည်။ မင်းသိလား? အင်္ဂလန်ကိုသွားမလား။ ဥပမာအားဖြင့် The Beatles အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်လီဗာပူးလ်သို့သွားပါ၊ သို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသောဆိပ်ကမ်းenjoyရိယာတွင်ပျော်မွေ့ပါ။
Isla de Lobos သည် Canary ကျွန်းစုတွင်အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်
Canary ကျွန်းစုတစ်ခုလုံးအနက် Furteventura သည်အာဖရိကနှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သည်။ အနောက်မြောက်ဘက် ...
Moher of Cliffs သည်အိုင်ယာလန်၏ခရီးသွား wond ည့်သည်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်ချောက်ကမ်းပါးများကိုကြိုက်သလားကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်ရုတ်တရက်ဖြတ်သန်းသွားခြင်းသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိ Moher ၏ချောက်ကမ်းပါးများ - မြေ၊
ဖလောရင့်စ်သည်လှပသော၊ တင့်တယ်လှပသော၊ ဒီမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး Florence ဟာအီတလီမှာရှိတဲ့ခရီးသွား destination ည့်သည်အ is ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်မလွဲ။ နိုင်ဘူး။ အနုပညာနှင့်သမိုင်းပြတိုက်များ၊ အလယ်ခေတ်လမ်းများ၊ ရင်ပြင်များ၊ မြစ်များ၊ တောင်တန်းများနှင့်အစားအစာများ!
Death Valley၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ခရီးသွားလုပ်ငန်း
သေမင်းချိုင့်ဝှမ်းသည်သေမင်းချိုင့်နှင့်တူသည်။ ကြီးမားသည်၊ သဲကန္တာရ၊ မီးခိုးရောင်၊ ဘ ၀ ကိုဖုံးကွယ်ထားပုံမရ။ သေမင်းချိုင့်ဝှမ်းရှိချိုင့်ဝှမ်းတစ်ခုမှာလုံးဝမသေဘဲအသက်တာ၊ နေ့ရောညပါပါ ၀ င်သည်။ Death Valley အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်အပူလွန်ကဲမှုကိုစိတ်ထဲမထားပါ၊
အဆိုပါ Loire ၏Châteaux Tour
အကယ်၍ သင်သည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပဲရစ်သို့သွားမည်ဆိုပါက Loire ရဲတိုက်များသို့သင်အမြဲစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ အားလုံးနီးပါးကိုသိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ ဥရောပသည်ရဲတိုက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသော်လည်းပြင်သစ်နိုင်ငံရှိလှပပြီးလှပသောလွိုင်ရဲတိုက်များနှင့်မတူပါ။ သူတို့ကိုသင်ဖြည့်ဆည်းရန် sign up လား?
Selva de Oza, သဘာဝနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြင်ဘက်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ကောင်းကင်အောက်၊ သဘာဝ၊ တောင်များအကြားဆက်သွယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သည်။ ဒီနေ့တောတွင်းအလှည့်ရောက်နေပြီလား။ တောင်တက်၊ ဇစ်ကြိုးလိုင်းများ၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ထို့နောက် Selva de Oza နှင့်၎င်း၏သဘာဝအလှအပများသို့လည်ပတ်ပါ။
Lacuniacha သည်သဘာဝကိုချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက်အထူးပြီးပြည့်စုံသော ဦး တည်ရာနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကတိရစ္ဆာန်များနှင့်တိရစ္ဆာန်ရုံများကိုသင်ကြိုက်သလား။ ထို့နောက် Aragon ရှိ Launiacha တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့သွားပါ။ သဘာဝပရဒိသု!
နှင်းလျှောစီးပရိတ်သတ်များသည်ဒေသတစ်ခုဖြစ်သော Cerdanya ရှိ La Molina အားကစားအပန်းဖြေစခန်းသို့အစဉ်အမြဲခြေချနိုင်ခဲ့ပြီ ...
သင်၏နောက်အားလပ်ရက်အတွက် Fuerteventura ကမ်းခြေ ၅
Castillo de Colomares, အလွန်ခေတ်မီရဲတိုက်
ဥရောပသည်ရဲရင့်သောအမျိုးမျိုးသောရဲတိုက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ စပိန်တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလယ်ခေတ်အဆောက်အအုံမရှိသေးပါ။ သို့မဟုတ်သင်ထူးဆန်းသောအရာများကိုစိတ်ဝင်စားပါကသို့မဟုတ် kitsch ကိုနှစ်သက်ပါက Malaga တစ်ဝိုက်လမ်းလျှောက်။ အရသာရှိသော Castillo de Colomares ကိုသိကျွမ်းပါ။
Zugarramurdi ၏ဂူ, Navarra အတွက်ဘဏ္treာကို
Navarra သည်မကြာသေးမီက Actualidad Viajes လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိနေပြီးသမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘာဝဘဏ္treာများစွာရှိသည်။ ဒီကနေ့စုန်းမများနှင့်မီးပုံများကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ Navarra ကိုသွားပြီးသူတို့ရဲ့အယူမှားထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကြောင့်ကျော်ကြားသော Zugarramurdi ဂူများကိုသိကျွမ်းပါ။
Ibiza ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါပထမဆုံးသတိရရမယ့်အရာကတော့ discos, pubs and coves တွေပြည့်နေတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။
ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာပဲအာရာဂွန်နဲ့နာဗာရာတို့ဖြစ်တဲ့ Yesa ရေလှောင်ကန်ကြားကကျက်သရေကိုပြောနေတာပါ။ ဤခရီးစဉ်၏ခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နာမည်ပေးသည်သင်အလယ်ခေတ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကိုနှစ်သက်ပါသလား။ လှပသော Navarra မြို့ရှိ Leyre ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးပထမဆုံး Navarre ဘုရင်များအနားယူပါမည်။
Navarra နှင့် Zaragoza ကြားရှိဓာတ်ပုံတွင် Yesa ရေလှောင်ကန်၌သင်တွေ့ရသောရေလှောင်ကန်သည် သင်ကြိုက်လား သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လှပသောရှုခင်းသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သဘာဝ၊ သဘာဝစွန့်ပစ်ထားသည့်ကျေးရွာများ၊ အလယ်ခေတ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့်နေများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက Yesa ရေလှောင်ကန်ကိုမလွတ်ပါနှင့်။
ရိုးရာအစဉ်အလာသည်လူတစ် ဦး ၏ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းပြီးမျိုးဆက်မှတစ်ဆက်သို့ကူးစက်သည်။
သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသင့်သော Catalan Catalan Pyrenees တွင်နေရာ ၆ ခုရှိသည်
ဆောင်းရာသီသည်နွေရာသီကိုစဉ်းစားရန်လော။ ဟုတ်ပါတယ်! နေပူကိုကျွန်ုပ်တို့လွင့်စင်သွားအောင်အပူပေးသောအခါ၎င်းသည်သင့်အားလပ်ရက်များကိုစီစဉ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Benidorm သည်စပိန်နှင့်ဥရောပတစ်ခွင်ရှိအလွန်ကောင်းသောကမ်းခြေနှင့်ညဥ့်ဘဝနေရာဖြစ်သည်။ ရွှေသဲများ၊ ကြည်လင်သောကြည်လင်သောရေများ၊ နေရောင်ခြည်၊ ပါတီပွဲများစွာရှိသည်။
စပိန်တွင်မယုံနိုင်စရာနေရာများရှိသည်။ သင်သဘာဝနှင့်ပြင်ပခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုနှစ်သက်ပါကကာရာလိုနီးယားရှိ Gerona ပြည်နယ်သို့သွားနိုင်သည်၊ ဆောင်းရာသီရောက်လာတော့နှင်းလျှောစီးခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ Nuria ချိုင့်ဝှမ်းနှင့်၎င်း၏ဘူတာကိုသင်သိပါသလား။ အေးဆေးလှတယ်၊
မိသားစုထွက်ပြေးရန်စီစဉ်နေပါသလား မင်းသွားချင်တဲ့နေရာကိုမင်းမဆုံးဖြတ်ဘူးလား။ သင်သောအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူ ...
Jutland ကျွန်းဆွယ်သည်နှစ်နိုင်ငံမျှဝေသည့်လှပသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပိုင်းတစ်ခုမှာဂျာမန်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာဒိန်းမတ်ဖြစ်သည်။ အလွန်လှပသောရှုခင်းများရှိသည်။ ဒိန်းမတ်! မင်းသွားခဲ့တယ် ကောင်းပြီ၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုခင်းများစွာရှိပြီးလှပသောအချို့သည် Jutland ကျွန်းဆွယ်တွင်ရှိသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ။ ကမ္ဘာ၏ဤဒေသသည်နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်မပြည့်သေးသောသတင်းဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၎င်းသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်မြို့ဟောင်းများစွာရှိပြီးသမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများကြွယ်ဝသည်။ သူတို့ဟာအမြဲတမ်းအလုံခြုံဆုံးမဟုတ်ပေမယ့်စွန့်စားခန်းကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ...
ကျေးလက်ထွက်ပြေးဖို့အတွက် ဦး တည်ရာ
ဒီဆောင်း ဦး ရာသီမှာခရီးသွားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောအားလပ်ရက်များစွာရှိသည်။ မြောက်မှတောင်သို့၊
ကမ္ဘာ၏အရေးအပါဆုံးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များ
ကမ္ဘာ့အရေးအကြီးဆုံးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများကိုသင်၏ဘ ၀ တွင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လည်ပတ်သင့်သည်။
San Juan de la Peñaတော်ဝင်ဘုန်းကြီးကျောင်း
စပိန်တစ်စုံတစ်ရာနှင့်ပြည့်နေလျှင်၎င်းသည်အသင်းတော်များနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများဖြစ်သည်မဟုတ်လား။ ကောင်းပြီ၊ Aragon တွင်ဤဓာတ်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ စပိန်တော်ဝင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများစွာရှိပြီးအထူးသဖြင့်တစ်ခုမှာ San Juan de la Peña၏တော်ဝင်ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် Catalonia နှင့်ဘာစီလိုနာတွင်အထူးသဖြင့်ဘာစီလိုနာတွင်လည်ပတ်ရန်လှပသောမြို့များစွာရှိသည် ...
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်မက်ဒရစ်မြို့သည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၉ သန်းကျော်ကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ဆိုလိုတာကတော့ ...
ရွေးချယ်စရာပါတကား! အမှန်တရားကတော့စပိန်နိုင်ငံမှာအလှဆုံးရဲတိုက်တွေရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ဖို့ခက်တယ်။ အများကြီးရှိတယ်။ စပိန်နိုင်ငံမှာလှပတဲ့ရဲတိုက်တွေအများကြီးရှိရင်ဘယ်လိုစာရင်းတွေလုပ်ရမလဲ။ မင်းတို့အတူတူကြိုက်ရင်ငါတို့စမ်းကြည့်ပြီးပြီ။
Fushimi Inari, တံခါးတစ်ထောင်၏ဗိမာနျတျော
ဂျပန်၌ကောင်းမွန်သောနေရာများရှိပြီးကျွန်ုပ်အကြံဥာဏ်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာလည်ပတ်ရန်မှာလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါစတုတ္ထအကြိမ်သွားမယ်။ အများကြီးကျန်နေသေးတယ်။ မင်းဂျပန်ကိုသွားပြီးကျိုတိုကိုသွားဖို့စီစဉ်နေသလား။ ထို့နောက် ၅ မိနစ်သာလမ်းလျှောက်။ တံခါးတစ်ထောင်ရှိသောတံခါးပေါက်ရှိ Fushimi Inari သို့သွားပါ။
အဆိုပါ Bardenas Real
Las Bardenas Reales သည်သဘာဝအလှအပနှင့်ရှုခင်းတို့၏သဘာဝဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံသည်ဥရောပခရီးသွား dest ည့်သည်များအကြားဖြည်းဖြည်းချင်းရောက်ရှိနေသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ လှတယ်! ၎င်း၏အလယ်ခေတ်မြို့များနှင့်ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ၏ခရီးသွား p ည့်ပုလဲများထဲမှတစ်ခုမှာ Bled Lake ဖြစ်သည်။ ဒါဟာနတ်သမီးပုံပြင်နဲ့တူတယ်! ကျွန်း, ပန်းချီဘုရားကျောင်း, အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ...
ယနေ့ဥရောပမြောက်ပိုင်းမှလာသည့်ရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးများသည်ဖက်ရှင်ကျနေသည်။ Netflix တွင်ဆွီဒင်မှထုတ်လုပ်မှုများစွာရှိသည်။ အော်စလိုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမြို့ဖြစ်ပြီးရက်အနည်းငယ်တွင်သင်သည်၎င်း၏အရေးကြီးဆုံးခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများဖြစ်ကြသောရဲတိုက်များ၊ ပြတိုက်များ၊ ဗိုက်ကင်းသင်္ဘောများ ...
လီယိုဘုရင် Alfonso IX မှ ၁၂၁၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော Salamanca တက္ကသိုလ်သည်အသက်အကြီးဆုံးဟုယူဆရသည်
ကျွန်တော်တို့ဟာကလေးများအဖြစ်ဖတ်သောထိုနတ်သမီးပုံပြင်များမှယူထားသောဥရောပမြို့များစွာရှိသည်။ ဂျာမနီမှာအတော်များများရှိပြီးတစ်ခုထဲကတစ်ခုကမြို့ငယ်တစ်မြို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဂျာမနီကိုသွားတဲ့အခါ pastel နဲ့ baroque မြို့ဖြစ်တဲ့ Oberammergau ကိုသွားပါ။
လှပသောရှုခင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဗိသုကာနှင့်ဘာသာရေးသမိုင်းတွင်ထိုးဖောက်နေသောအခြားသူများကလမ်းများနှင့်လမ်းကြောင်းများ၊ လမ်းကြောင်းများရှိသည်။ စပိန်နိုင်ငံတွင်လှပသောခရီးသွား routes ည့်လမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုမှာ Cistercian Route ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘာသာရေး၊ ဗိသုကာနှင့်သမိုင်းကိုကီလိုမီတာအနည်းငယ်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Guadalajara ရှိ Infantado မင်းသမီး၏နန်းတော်သည် Castilian-La Mancha မြို့ရှိအလှဆုံးအဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည်။ ကြေငြာသောအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ...
လူသားသည်အထက်သို့တက်ခြင်းကိုအမြဲနှစ်သက်သည်။ ကမ္ဘာကြီးသည်မိုးကောင်းကင်ကိုခြစ်ရာသို့မဟုတ်မိုးတိမ်သို့ရောက်ရန်ကြိုးစားသောဆောက်လုပ်ရေးများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ In သင်သည်အီတလီသို့ခရီးထွက်လျှင် Pisa Tower ကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။ Sñi, ကျော်ကြားမြှောင်မျှော်စင်။ ၎င်းသည်ဖလောရင့်စ်နှင့်အလွန်နီးစပ်သည်
Valle de Nuria သည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ ၂၀၀၀ တွင်တည်ရှိပြီး Pyrenees ပြည်နယ်ရှိချိုင့်ဝှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Mallos က de Riglos
ကမ္ဘာကြီးသည်ထူးဆန်းသောနေရာများ၊ နေရာမရွေး၊ မသိသောသူတစ် ဦး ဦး ၏လိမ္မာပါးနပ်သောစတိုင်လက်ဖြင့်ထွင်းထုထားပုံရသောနေရာများရှိသည်။ ဤသည်မှာ Mallos de ကိစ္စဖြစ်သည်။ သင်တောင်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်တောင်တက်ခြင်းများကိုနှစ်သက်လိုပါကထို့နောက် Huesca သို့သွားပြီးလှပသော Mallos de Riglos တွင်ပြုလုပ်ပါ။ ဒါပမေဲ့အံ့သွပုံသဏ္ဌာန်မြင့်တက်ကျောက်ဆောင်!
ပေါ်တူဂီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလှပတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Actualidad Viajes မှာပြောနေတာပဲ။ အကယ်၍ သင်သည်လစ္စဘွန်းသို့သွားလျှင် Santaurio de Fátimaသို့လေ့လာရေးခရီးသွားရန်မမေ့ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်အလွန်နီးကပ်သည်၊ လှပသည်၊ ကြီးမားသည်၊
သင်ဗိသုကာကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်လူသိများသောထိုက်တန်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အဆောက်အ ဦး များစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပေါ်တူဂီတွင်အဆောက်အ ဦး များစွာရှိသည်။ သင်လစ္စဘွန်းသို့သွားမည်လား။ ထိုအခါလှပသော Torre de Belémသို့သွားရန်မမေ့ပါနှင့်။ အပြင်ပိုင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းလှပမှုရှိပြီးလှေကားထစ်များမှမြင်ကွင်းများသည်အကြည့်အများဆုံးဖြစ်သည်။
ဥရောပသည်ချာ့ချ်များနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးအလှဆုံးအချို့မှာစပိန်နိုင်ငံတွင်ရှိသည်။ စပိန်၏ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သောဂူဒလာလီ၏ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည်အော့စထရာမဒူးရာ၌တည်ရှိပြီးလှပသောဂွာဒါလူပီဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်သည်။ ဒါကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့
အဘယ်အရာကို Santiago က de Compostela တွင်ကြည့်ပါ
Santiago de Compostela သည်ရောမ၊ ဂျေရုဆလင်နှင့်အတူခရစ်ယာန်ဘာသာ၏သန့်ရှင်းသောမြို့တော်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရာစုနှစ်အတွင်း ...
မလေးရှားရှိအထင်ကရအဆောက်အ ဦး များထဲမှတစ်ခုကတော့ Petronas Towers ဖြစ်သည်။ သင်သည်၎င်း၏အမည်ကိုမသိကောင်းသိနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုနှစ်ဆမြင်တွေ့ရသည်မှာသေချာသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလှဆုံးမိုးမျှော်တိုက်တစ်ခုမှာမလေးရှား၏ Petronas မျှော်စင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာကွာလာလမ်ပူရဲ့သရဖူဖြစ်ပြီးမင်းသူတို့ကိုမလွတ်နိုင်ဘူး။
ငါတို့အန်းဖရန့်ခ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုငါတို့အားလုံးကြားဖူးတယ်။ စာအုပ်၊ ရုပ်ရှင်၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အတွက်သို့မဟုတ်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အလည်အပတ်အများဆုံးပြတိုက်များထဲမှတစ်ခုမှာအန်းဖရန့်အိမ်ဖြစ်သည်။ အန်းနှင့်သူမ၏မိသားစုသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကနာဇီများထံမှပုန်းအောင်းနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လက်တင်အမေရိကသည်လူမျိုးစုများကိုအရည်ပျော်စေသောအိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းထောင်ချီသည့်ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများသည်အရေးပါသောအမွေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်မဟုတ်တဲ့သူအတွက်၊ မင်းကအီကွေဒေါကိုမသွားဘူးလား။ ကောင်းပြီ၊ လှပတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးဓလေ့ထုံးစံတွေအများကြီးရှိတယ်။ မလည်ပတ်မီသူတို့ထဲမှအချို့ကိုသိကျွမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ လောကဝတ်၊ ပုံမှန်ဝတ်စုံများ၊ အစားအစာများ ...
သင်ကတောင်အမေရိကကိုမသိလျှင်၊ ဘိုလီးဗီးယားသည်ဘက်ပေါင်းစုံသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်ကိုသင်မသိနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ပြောရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင်ဘိုလီးဗီးယားသို့သွားမည်လား။ တကယ့်ကိုလှပတဲ့ခရီးပဲ။ ၎င်းတွင်ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ သမိုင်းနှင့်အရသာများစွာရှိသည်။ အရာအားလုံးကိုအနည်းငယ်ကြိုးစားကြည့်ဖို့သေချာပါစေ။
အလယ်ခေတ်စိတ်ကူးယဉ်သည်အလွန်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းတွင်မှော်နှင့်နိုင်ငံရေးပယောဂမှအချစ်ဇာတ်လမ်းမှသည်သူရဲကောင်းဆန်ဆန်အထိပါဝင်သည်။ မင်းသည် Thrones ဂိမ်းကိုနှစ်သက်သလော။ ကောင်းပြီ၊ အိုင်ယာလန်နဲ့စပိန်နိုင်ငံတွေမှာမင်းဇာတ်လမ်းအတော်များများရိုက်ကူးထားတဲ့သဘာဝအခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်။
Cala Mitjana, နွေရာသီ ဦး တည်ရာကို
တစ်ဖန် Menorca အားလှပသောကမ်းခြေများဖြင့်လှပသောကျွန်းကိုထပ်မံလူကြိုက်များပြီးအကြံပြုလိုသောနွေရာသီခရီးစဉ်အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ဒီနွေရာသီမှာမင်းအားလပ်ရက်ခရီးထွက်မသွားသေးဘူးလား။ ထို့နောက် Menorca သို့ သွား၍ Cala Mijtana တွင်နေပူခြင်းကိုမရပ်ပါနှင့်။
ရှေးဟောင်းArtáဂူများသည် Mallorca တွင်တည်ရှိပြီးရှေးဟောင်းဖွဲ့စည်းမှုများဖြင့်ကျွန်းသို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အလည်အပတ်ခရီးကမ်းလှမ်းသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ခရီးသွား most ည့်သည်အ ၀ င်ဆုံးမြို့များအနက်မှတစ်ခုမှာရောမမြို့ဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းအပျက်အယွင်းများ၊ အဆောက်အ ဦး များရောမသည်ထာဝရမြို့ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်ရမည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ လက်မလွတ်ရ၊ လမ်းလျှောက်ရန်၊ မည်သည့်လမ်းကြောင်းများလိုက်ရန်၊ ရိုးမား Pass ကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်၊ စသည်တို့
Garganta la Olla မှာဘာတွေကြည့်ရမလဲ
Extremadura မှာနွေရာသီလား ထို့နောက် Garganta la Olla ကို ဖြတ်၍ လမ်းလျှောက်ပါ။ လမ်းများလမ်းလျှောက်ပါ။ အိမ်ဟောင်းများကိုသိပြီးရေတံခွန်များနှင့်သဘာဝရေကန်များ၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလန်းဆန်းစေပါ။
Seville ရှိ Santa Cruz ရပ်ကွက်
Seville ရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့ Santa Cruz ရပ်ကွက်ကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားရင်ကော။ အိမ်ဟောင်းများ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ အဆောင်များ၊ ရင်ပြင်များနှင့်တာကပ်စ်နေရာများစွာရှိသည်။
Sierra de Aracena (Huelva) ရှိအလှဆုံးကျေးရွာများ
Sierra de Aracena နှင့် Picos de Aroche သဘာဝဥယျာဉ်သည် Sierra de Huelva ဟုလူသိများသည်။
Sierra de Cádizမှာဘာကြည့်ရမလည်း
အဘယ်အရာကို Niebla, Huelva မှာကြည့်ရမလဲ
Huelva ရှိ Niebla မြို့သည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်များပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်း၏လူသိများသောနံရံများနှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများရှိသည်။
အဘယ်အရာကို invora တွင်ကြည့်ပါ
ဒီနွေရာသီမှာဥရောပမှာရှေးအကျဆုံးနဲ့အလှဆုံးမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့Évora၊ ပေါ်တူဂီမှာဘုရားကျောင်းတွေ၊ ရောမဘုရားကျောင်းတွေ၊
လီယွန်သည်စပိန်နိုင်ငံရှိအခြားခရီးသွား inations ည့်သည်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Marbella သည် Malaga ရှိဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးကမ်းခြေ၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကို Jerte ချိုင့်၌, Extremadura တွင်ကြည့်ရှုရန်
Valle del Jerte သည် Extremadura တွင်တည်ရှိပြီးအလွန်လှပသောသဘာဝနေရာများအပြင်မြို့ငယ်များသို့သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်။
နွေရာသီရောက်တော့မယ်! သင်ပေါ်တူဂီကိုဖြတ်သွားရင် Algarve ကမ်းခြေကိုသွားပြီး Tavira ကျွန်းကိုကမ်းခြေတွေနဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့မင်းဟာ nudism ကိုတောင်လေ့ကျင့်နိုင်တယ်။
ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်သင်သည်စပိန်နိုင်ငံရှိအလှဆုံးမြို့များဖြစ်သောပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်၊ အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်နှင့်အနက်ရောင်လမ်းကြောင်းများရှိသည့် Morella သို့သွားရောက်နိုင်သည်။
စပိန် Tuscany, Matarraña (Teruel) တွင်အဘယ်အရာကိုမြင်ရမည်နည်း
မြေထဲပင်လယ်ပင်လယ်နားတွင်၊ ဗလင်စီယာ၊ အာရာဂွန်နှင့်ကာတာလိုနီးနီးယားအကြားနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ပြီးမဂ်ဖ်စဂါဂိုအောက်ပိုင်း၊
Ronda သည်စပိန်နိုင်ငံရှိရှေးအကျဆုံးနှင့်အလှဆုံးမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Malaga ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိပြီး ...
အဘယ်အရာကိုကြည့်ရှုရန် Astorga, လီယွန်ပြည်နယ်
Leonese မြို့ Astorga သည် Camino de Santiago အတွက်ဖြတ်သန်းရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
Gothic saxophones, ဂူများနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများတွင်တူညီချက်တူညီမှုရှိသည်။ Dinant သည်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ Wallonia ဒေသရှိလှပသောမြို့ငယ်လေးဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကို Jerez de la Frontera, Andalusia တွင်ကြည့်ရှုရန်
Jerez de la Frontera မြို့တွင်လှပသောသမိုင်းဝင်စင်တာတစ်ခုရှိပြီး၎င်း၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာနေရာများသို့သွားရောက်လည်ပတ်သည့်အခါအထိမ်းအမှတ်များစွာရှိသည်။
ပေါ်တူဂီကိုသွားမလား ထို့နောက် Porto နှင့်အလွန်နီးသော Lamego သို့မသွားရန်မမေ့ပါနှင့်။ ၎င်းသည်စပျစ်ခြံများ၊ ရဲတိုက်များ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊
စပိန်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ် gastronomic အသုံးအနှုန်းများအတွက်စကားပြောပေမယ့်သဘာဝလည်း။ မြောက်မှတောင်သို့…
Albacete ရှိရီယိုမိုဒိုကို ဖြတ်၍ လမ်းလျှောက်
Sierra del Segura နှင့် Sierra de Alcaraz အကြား Albacete ရှိ Los Calares သဘာဝဥယျာဉ်သည် ...
တိုကျိုကိုသွားမလား မြို့၏အလှပဆုံးဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Shinjuku Gyoen သည် The Anne of Words ဥယျာဉ်တွင်ပြသသည့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
Krakow မြို့ပြareaရိယာ၌ Wieliczka ဆားတွင်းများရှိပြီး၎င်းကို ...
လှပသော Huatulco ပင်လယ်အော်
သဲသောင်ပြင်ကမ်းခြေကြိုက်သလား ထို့နောက်မက္ကဆီကိုပစိဖိတ်ရှိBahías de Huatulco ၏လှပသောကမ်းခြေများကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။
ပုံရိပ် Asturias ခရီးသွားလုပ်ငန်းသင်သည်အားလပ်ရက်ရက်အနည်းငယ်လောက်သိမ်းဆည်းပြီးအောက်တိုဘာလတွင်၎င်းတို့ကိုအသုံးချလိုပါသလား။ ပညာရှိရွေးချယ်မှု! ဘယ်အချိန်မှာလဲ
Cap de Creus၊ မြေ၊ နေနှင့်ပင်လယ်
စပိန်ရဲ့အရှေ့ဘက်စွန်းကိုသိရင်ကော။ Catalonia တွင် Cap de Creus ဖြစ်သည်။ ကုန်းမြေနှင့်ပင်လယ်ကိုအခြားသူများနည်းတူပေါင်းစပ်ထားသည်။
Ávila၏အလယ်ခေတ်မြို့ရိုးများသည်ရှည်လျားသောသက်တမ်းရှည် Cast Castilon Leonese မြို့၏အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။ စပိန်မှာသူတို့အများစုဟာ ...
Laguna Negra, အာဂျင်တီးနားတောင်ပိုင်းအတွက် ဦး တည်ရာ
အာဂျင်တီးနားတောင်ဘက်ကိုသွားမလား တောင်တက်ရတာကြိုက်လား? ထိုအခါ Black Lagoon သို့သွားသောလမ်းကြောင်း - သစ်တောများ၊ ကျောက်တုံးများနှင့်ကမ်းခြေတို့ကိုမလွတ်ပါနှင့်။
စပိန်၏မြို့တော်ဖြစ်သောမက်ဒရစ်သည်အထင်ကရအဆောက်အအုံများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ ပန်းခြံများ၊ ပြတိုက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ များစွာသော ...
သုံးရက်အတွင်းဘာလင်၌သင်ဘာကိုသိနိုင်သနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ဘာလင်မှာ ၇၂ နာရီကြာလမ်းညွှန်ပြသထားတယ်၊ ပြတိုက်များ၊ ရင်ပြင်များ၊ နံရံ။
စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအထူးသဖြင့် Andalusia ကိုသိကျွမ်းရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းမှာရွာဖြူများမှ ဖြတ်၍ သွားသောလမ်းဖြစ်သည်။
Bien Aparecida ၏ Sanctuary သို့သွားပါ
စပိန်တွင်အကြံပြုလိုသောဘာသာရေးနေရာများစွာရှိသည်။ Cantabria ၏နာယကသူတော်စင် Virgen de la Bien Aparecida ၏သန့်ရှင်းရာဌာနကိုအဘယ်ကြောင့်မလည်ပတ်သနည်း။
ရေ၊ ရေကူးတာ၊ ပျော်တာပျော်တာလား။ ထို့နောက်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးသဘာဝရေကန်အချို့၏အမည်ကိုချရေးပါ။
အခြားရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးလန်ဒန်ကိုသိရန်အတွက်၎င်း၏သာလွန်သောစျေးကွက်များကြောင့်ကျော်ကြားသောကန်ဒန်းမြို့ကိုသွားခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသောအရာမရှိပါ။
Jack the Ripper နှင့် Sherlock Holmes နှင့်အတူလန်ဒန်
Jack the Ripper နှင့် Sherlock Holmes တို့တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့် London ကိုရှာဖွေပါ။ အင်္ဂလိပ်မြို့တော်၏အဟောင်းလမ်းများမှတဆင့်သေဆုံးမှု၊ သားကောင်များ၊ လူသတ်သမားများ၊ ရန်သူများကပရိယာယ်များ။
Cuevas del Soplao သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထူးခြားသည့်အခေါင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်
ဘူမိဗေဒ၏ Sistine Chapel ဟုလူသိများသော Soplao ဂူများသည်ဘူမိဗေဒ၏အထိမ်းအမှတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျကမ်းခြေ, သန္တာနှင့်သဘာဝကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား ထို့နောက်ဖီဂျီသို့လက်မှတ်ဝယ်ပြီးအိုစီနီးယားရှိစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနွေးထွေးသောကျွန်းများကိုနှစ်သက်ပါ။
Tenerife ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေ ၁၀ ခု
ဤရွေ့ကားကျွန်း၏သဘာဝအလှတရားကိုသရုပ်ပြသည့် Tenerife အတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းခြေ 10, stupendous သဲဒေသများအချို့ရှိပါသည်။
အဘယ်အရာကိုမော်လ်တာမှာမြင်ရ, ဥရောပအတွက် ဦး တည်ရာ
ဒီနွေရာသီမှာမော်လ်တာကိုဆက်သွားပါ ဒါဟာကမ်းခြေ, ပြတိုက်, သမိုင်းမနှင့်အလယ်ခေတ်သမိုင်းရှိပါတယ်။ သငျသညျစက္ကန့်ဘို့ပျင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
Titicaca ရေကန်တွင်၎င်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်သူများအားဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အရာရှိသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးသွားနိုင်သောရေကန်ဖြစ်သည်။
Giant's Causeway သည်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက်သဘာဝအလှတစ်ခုဖြစ်သည်
အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝအံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ The Giants 'Causeway! မြေနှင့်ပင်လယ်အကြားရှိ Basalt ကော်လံ ...
Moher ၏ကမ်းပါးများ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံသို့အထူးခရီးစဉ်
အိုင်ယာလန်ရှိအကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးချောက်ကမ်းပါးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Moiff of the Cliffs!
အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏ပုခက်၊ တောင်ကုန်းခုနစ်ခု၊ အံ့မခန်းဖွယ်ဗိသုကာလက်ရာများကိုရောမအားစဉ်းစားရန် ...
အကယ်၍ Count Dracula ၏ဇာတ်လမ်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၊ ရိုမေးနီးယားရှိ Bran Castle သို့ သွားရောက်၍ မမေ့နိုင်သောဟယ်လိုဝိန်းပွဲကိုပင်ကျင်းပနိုင်သည်။
Belchite, Zaragoza အတွက်သမိုင်းနှင့်အတူ ဦး တည်ရာ
အီစတာသည်လာနေသည်။ စပိန်တွင်ပြည်တွင်းစစ်၏တစ္ဆေမြို့ဖြစ်သော Belchite သို့သင်သွားနိုင်သည်။ ညဉ့်အခါ၎င်း၏အပျက်အယွင်းအကြားလမ်းလျှောက်လာကြ!
Valencia ကမ်းခြေသည်စပိန်နိုင်ငံရှိအဓိကနေရာများဖြစ်ပြီးနေတွင်နေလို။ နေလိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
Asturias ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများ၊ လှပသော Asturian ကျွန်းကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးသဘာဝနေရာများနှင့်ဝန်းရံထားသောကမ္ဘာတွင်ထူးခြားသည်။
သင်အီတလီကိုသွားမလား သင်အပျက်အယွင်းများကိုကြိုက်လား? Pompeii ကိုသွားလည်မလား ထိုအခါ Herculaneum ၏အပျက်အယွင်းများကိုမစွန့်ပစ်ပါနှင့်။ သူတို့ကအလွနှင့်အလွန်နီးကပ်များမှာ!
ပေါ်တူဂီမြို့တော် Sintra၊ လစ္စဘွန်းနှင့်နန်းတော်များနှင့်လှပသည့်သဘာဝနေရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောမြို့တွင်မည်သည့်အရာနှင့်ကြည့်ရှုရမည်ကိုရှာဖွေပါ။
တောရိုင်းသစ်တော၏အကြီးဆုံးဥရောပသစ်တောသစ်တောသည် Irati Forest ဖြစ်သည်
Playa del Carménနှင့်Tulúmတို့ကိုမေ့လိုက်ပါက Grutas de Tolantongo သို့သွားရောက်ပါ။ သူတို့မမေ့နိုင်စရာပါ! ရေချိုရေကန်များ၊ ရေပူစမ်းများ၊ ဥမင်များ၊
သေးငယ်သောနှင့်တိတ်ဆိတ်သောကမ်းခြေများမှခရီးသွား centers ည့်စင်တာများရှိအခြားကမ်းခြေများအထိ Mallorca ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများကိုရှာဖွေပါ။
မက်ဒရစ်မှကီလိုမီတာ ၈၀ နှင့် Segovia မှ ၁၃ ကီလိုမီတာသည် Real Sitio de la Granja de ဖြစ်သည်။
မက်ဒရစ်ရှိ Ritz ဟိုတယ်သည်၎င်း၏တံခါးများကိုပိတ်ထားသည်
၁၉၁၀ ခုနှစ်မှာ Ritz Hotel ဟိုတယ်တံခါးကိုအများပြည်သူသိအောင်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ တစ်ကြိမ်မှာ ...
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားကိုကြည့်ဖို့ရုရှားကိုသွားမလား ထို့နောက် Red Square တစ်လျှောက်လုံးပြတိုက်များ၊ နန်းတော်များ၊ အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများ၊ အရာအားလုံးရှိတယ်။
မြို့၏ခရီးသွား can ည့်နေရာများမှကျော်ကြားသော Tabernas သဲကန္တာရကဲ့သို့ပြည်နယ်၏ပေါ်လွင်ဆုံးအထိAlmeríaတွင်သင်တွေ့သမျှအရာအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၁၁ ဦး သည်အလွန်နည်းပါးစွာလည်ပတ်ခဲ့သည့်နေရာများဖြစ်သည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစပိန်သည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၈၂ သန်းဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်စံချိန်တင်ခဲ့သည်။
သငျသညျကျွန်းများသို့မဟုတ်စပ်စုနေရာများကြိုက်နှစ်သက်လျှင်, Azores အတွက် Vila Franca ၏ကျွန်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ပင်လယ်နှင့်ဆက်သွယ်ထားသောပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခု၊ ကမ်းခြေငယ်တစ်ခု၊ အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တိုကျိုတွင်စားခြင်းသည်အမြဲတမ်းပါတီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤနေရာ ၅ ခုတွင် vampires, psychedelic dream, ninjas ...
ပြီးပြည့်စုံသောဟိုတယ်ကိုရှာရန်လှည့်ကွက် ၈ ခု
ကိယက်ဗ်သည်အလယ်ခေတ်နှင့်ခေတ်သစ်သမိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့်နံရံများ၊ ဂူများ၊ ဆိုဗီယက်အဆောက်အ ဦး များ၊
အစ္စရေးကိုခရီးသွားဖို့စီစဉ်နေသလား။ Tel Aviv ကိုပိုက်လိုင်းဖြင့်မထားခဲ့ပါနှင့်၊ ၎င်း၏သမိုင်း၊ ၎င်း၏ရပ်ကွက်များ၊ ကမ်းခြေ၊ Dead Sea သို့မဟုတ် Masada သို့လေ့လာရေးခရီးများ။
ဗီယက်နမ်သည်ဟနွိုင်း၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီးနှစ်ထောင်ချီ။ သမိုင်းကြောင်းရှိသည့်အတွက်၎င်း၏ခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များကိုမလွတ်စေပါ။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ် ၀ င်စားမှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု Mejorada del Campo ရှိ Justo ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း?
Virgen del Pilar နေ့တွင် ၁၉၆၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ပထမဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့သောကျောက်တုံးမှသည်ယနေ့အထိ ...
Toledo ရှိ Sephardic ပြတိုက်၊ စပိန်ဂျူးယဉ်ကျေးမှုသို့သွားသောခရီး
အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေအနားယူနိုင်ရန်အတွက်ဒူဘရူဗစ်၏ကမ်းခြေနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိငြိမ်းချမ်းသောထောင့်ကန်များသို့အကောင်းဆုံးလည်ပတ်မှုများရှာဖွေပါ။
Wild Atlantic Way, အိုင်ယာလန်ရှိကမ်းရိုးတန်းလမ်း
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်ကားတစ်စီးငှား။ အတ္တလန္တိတ်ကမ်းခြေကိုလှုပ်ခတ်နိုင်သည် - လှပသောတောရိုင်းအတ္တလန္တိတ်ကမ်းခြေတွင် ၂,၅၀၀ ကီလိုမီတာရှိသည်။ ကမ်းခြေများ၊ ကမ်းပါးများ၊ ရဲတိုက်များ၊ ကျေးရွာများ။
ပီရူးမှာရှိတဲ့ Machu Picchu ကအရာရာတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကာရိုးအပျက်အယွင်းများသည်လှပပြီးသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်များဖြစ်သည်။
CR7 သည် Marrakech၊ Madrid နှင့် New York တို့တွင်ဟိုတယ်အသစ်များဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ရှောင်ရှားရန်လမ်းကြောင်း ၁၂ ခုရှိသည်
အားလပ်ရက်ခရီးသွားရင်းခရီးသွား while ည့်သည်များရှောင်သင့်သောနေရာ ၁၂ ခုစာရင်းကို CNN မှမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဂေဟစနစ်နှင့်ဇိမ်ခံအပန်းဖြေစခန်း ၃ ခု
Gulpiyuri ကမ်းခြေ, Asturias ၏ပုလဲ
လာမယ့်နွေရာသီမှာကမ်းခြေကိုသွားဖို့စီစဉ်နေသလား။ ထို့နောက် Asturias နှင့်၎င်း၏ကမ်းခြေများကိုကြည့်ပါ။ Gulpiyuri's သည်အဖိုးတန်ပုလဲဖြစ်သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Ryanair ပေါ်လစီသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။ သင်လေကြောင်းလိုင်း၏ပုံမှန်ဖောက်သည်ဖြစ်လျှင်ဤပြောင်းလဲမှုများကိုသင်သိသင့်သည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် Ryanair သည်ကန့်သတ်ထားသောအိတ်များပေါ်လစီအသစ်ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ပီရူးသည်တောင်အမေရိကရှိအလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး Titicaca ရေကန်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလှဆုံးကန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Totora ကျွန်းများ၊
Huayna Picchu, ပီရူးမှာရှိတဲ့ရတနာ
ပီရူးကိုသွားမလား သင် Machu Picchu ကိုသွားလည်မလား ထို့နောက်နှလုံးကိုညှစ်ပါ၊ ခေါင်းမူးခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီး Huayna Picchu သို့တက်ပါ။ သင်သည်အကောင်းဆုံးအမြင်များဖြင့်ဆုချခံရလိမ့်မည်။
ဘာလင်5ဘော်ဒါဆောင်
သင်ဘာလင်သို့သွားပြီးမြို့တော်ကိုသိကျွမ်းရန်၊ လူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ ပျော်ရွှင်ရန်နှင့်ငွေအမြောက်အမြားမသုံးလိုပါသလော။ ဒါကြောင့်ဘော်ဒါဆောင်မှာအိပ်ပါ။
ရေခဲပြင်ဟိုတယ်များသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအဆိုပြုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီအတွက်ဖန်တီးထားသည့်အရာများအားလုံးနီးပါးကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
ပဲရစ်5ဘော်ဒါဆောင်
သင်ပဲရစ်တွင်နေရာထိုင်ခင်းရှာနေပါသလား။ စျေးနည်းနည်းကဘာလဲ? ထိုအခါကျောပိုးအိတ်နှင့်ရိုးရှင်းသောခရီးသွားများအတွက်အဆောင်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပါရီရှိဤအဆောင် ၅ လုံးကိုစာရင်းပြုစုပါ။
Villar del Humo ၏ဂူပန်းချီကားများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Villar del Humo ၏ဥမင်ပန်းချီကားများရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော် ...
နယူးယောက်ကို backpacking လုပ်ပြီးသိမ်းချင်ပါသလား။ ဒါကြောင့်အဆောင်တစ်ခန်းမှာနေပါ၊ အရာအားလုံးနည်းနည်းလေးပဲရှိပေမယ့်တချို့ကအရမ်းကောင်းပြီးစတိုင်ကျတယ်။
Dublin ရှိ5ဘော်ဒါဆောင်
သငျသညျ Dublin ဖို့, သင်စိန့်ပက်ထရစ်အဘို့အခရီးကိုသွားလျှင်သင်နောက်ထပ်ကြည့်ရှုပါ: ဒီမှာ Dublin အတွက်ကောင်းသောအဆောင်များ5။ ကောင်းပြီ, စျေးပေါ။
အထူးကျက်သရေနှင့်အတူစပိန်အတွက်5မြို့ပြပန်းခြံများ
၁၆ Sardinia ၁ တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလည်ပတ်မှု ၁
ဝေးလံပြီးလှပသောနေရာတစ်ခုလား။ ကမ်းခြေများ၊ သန္တာ၊ ဒီရေတောများ၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပုံပြင်များ။ ကောင်းပြီ၊ ဆော်လမွန်ကျွန်းစုတွင်သင်တွေ့သမျှအရာအားလုံးကိုထပ်မံပြီး